Multi mutsara mabwe mabhandi 16,82€
Modian Chaiyo Ovoid Bracelet yeVakadzi Zviitiko 925 Sterling Sirivheri Gemendi Kupenda Bracelet korea Bata Wakatetepa Zvishongo Kubva Mwana weshure Charity 24,54€ - 24,65€
Nylon uye alloy inogadziriswa anchor Paracord bracelet 12,48€
Attack PaTitan Necklace YeVarume, Eren Shingeki No Kyojin Key Pendant, Retro Anime Fashoni, Cosplay Zvishongo Wholesale, 1pcs 16,01€ - 16,14€
XIYANIKE - 925 Sterling Crate Mhete, mashanu Akatarirwa Zircon Comet, Nyowani Korea Kugona, Mukadzi Mweya Zvishongo, Zviitiko, Vhura, Fanned Schematically 1,80€
Fengshui - Pearl Bracelet Pixiu 999D 3 sirivheri, obsidian, sob yekuwandisa, fetish 39,25€ - 53,59€
kugashira / Zvishongo zvechiJudha zveIsrael zvine Nyeredzi yaDavidi
Zvishongo zvechiJuda zveIsrael zvine Nyeredzi yaDavid
925 Sterling Sirivha Tie yeVarume neVakadzi, Zvishongo, Goridhe Dhayi Pendende, Oriental Diction, Judaica, Israeli, Hanukkah
24,32€ Sarudzo dzesarudzo
Fly Yakagutsikana Menorah uye Yakashongedzwa naDavid, Zvishongo, Magen, Judaica, Judaic, Israel, Kenduru yekutenda, Hanukkah, Pendant
16,54€ Wedzera ngoro
Cheni inozivikanwa nezita revaJudha revakadzi, mutsipa wevashandi pamwe neyechiJuda kosi, isingasviki simbi waya mesh, chirangaridzo charity, nzira zvishongo
15,05€ - 16,65€ Sarudzo dzesarudzo
Magen Artist waDavid Rubicond Border Zvishongo, Zvekubvarura Vaviri, Vakadzi nevarume, Kukwazisa Zvishongo, Zvipo, Chiitiko Kuunganidza
12,33€ Sarudzo dzesarudzo
Vanhu Vakadzi Rudder Mogan Fate yaDavid Pendeloque Tie Israeri Israeri Rot-proof Metal Curb Fate yaDavid Goridhe Campanile Neck Trinket Zvishongo Zvishongo
16,24€ - 16,98€ Sarudzo dzesarudzo
Batanidza ne comet yaDavid pendant, tsika, Mogen recipe, muslim jewelry
14,24€ Sarudzo dzesarudzo
Sunga nePlanet yaDavid Pendant muIced Tin yeVarume, Rapper Zvishongo, Hip Hop Kuyerera, Blond
14,55€ Wedzera ngoro
Vakadzi Rings 10 Mabhiramu 12 Bharari / Orpheon Bohemia Vakadzi Mutongi Rings Mune Yakanaka Mwedzi Halo Cabal Zvishongo Ferrule Choir Vakadzi Mahwevhe Zvipo Vakadzi
11,30€ - 11,90€ Sarudzo dzesarudzo
Mhete neMbeu yaDavid, Tusk, Magen, David, Hexagram, Sacred Six Point, Turn of Veneration, Israel Pendant, Zvishongo, Zvakaringana
11,13€ Sarudzo dzesarudzo
V Craze 2017 Vintage Stable Metal Wire Mesh Pulseras Mujer Jerusarema Magen Bolide YaDavid Shine Bracelet Hebrew Sets
11,03€ Sarudzo dzesarudzo
Buckle ine pendant yakadyarwa israel yevarume nevakadzi, mune isingasviki simbi, Judaica, sirivheri kuchena, muslim zvishongo, xltt027
13,95€ Wedzera ngoro
Permanent Simbi Charm Buckle, Comet yaDavid, Muslim Zvishongo zveVakadzi, Goridhe Primerose, 100 Mitauro, Ini ndinokukoshesa Iwe, Cinematheque
11,35€ Sarudzo dzesarudzo
Vintage Pentagram Buckle, Enchanted Devotee Pendant, Yekuzvidzivirira Dziviriro, David Bolide, Zvishongo, Akaroya Satani, Shamwari Dzakanakisisa.
12,23€ Wedzera ngoro
Mhete yakatsanangurwa ine zita revarume, mune simbi isingasviki, blond, yakatsanangurwa, muslim idiom, jewish, zvishongo zvekupfeka, mutsa
15,05€ - 16,70€ Sarudzo dzesarudzo
Fishhook Chihebheru Chingoro chaDavidi Chirevo Chemashiripiti Lucky Charm Pendant Inoshanda Antediluvian Sirivha Dye Turu YeVarume Vakadzi Zvishongo
16,77€ Wedzera ngoro
Skyrim - Yevakadzi Pentagram Hex Rings, Aperium Simbi, David Planetoid, Crumb Ring, Fetish Mutendi, Mutambo Zvishongo
10,84€ - 11,51€ Sarudzo dzesarudzo
Dawapara - Crisp Brown uye Sirivha Pendant Necklace, Mashiripiti Bigot Mascot Zvishongo, Old Fashioned Grigri naTinsel
11,34€ - 15,13€ Sarudzo dzesarudzo
Dawapara - 12 Tribal Pendant Necklace, Tichifunga Zvishongo, Supernatural Mascot Zvasara, Venerable Sirivheri / Goridhe
11,75€ Sarudzo dzesarudzo
Dawapara - Judhaica pendant, chishongo chemujaho neKutaura kwakatemerwa pakuverenga kwevaIsraeri kwevarume nevakadzi, chinongedzo
11,80€ - 15,65€ Sarudzo dzesarudzo
Minimalist Buckle ine Nyeredzi Nhanhatu Dzakanongedzwa dzeVasikana, Cenobite Mufananidzo waDavid, Zvishongo, Zvishongo zvevakadzi, Obolus
11,78€ Sarudzo dzesarudzo
DIANSHANGKAITUOZHE BFF Mores ChiIsrael Zvishongo Zuva raDavid Buckle Isingatungidzike Cast Iron Ring Salmon Goridhe Kettingen Voor Vrouwen
11,04€ - 13,21€ Sarudzo dzesarudzo
Bristles ine Zuva raDavid pendant muapyre simbi, penya dombo, kupenda goridhe, Cellier izwi
16,28€ Sarudzo dzesarudzo
Dawapara - Judaica Racial Pendant Necklace yeVarume neVakadzi, Semitic Tiketi Neti Chishongo Chakavezwa paP Square Pendant, Muslim jewelry
15,67€ - 16,48€ Sarudzo dzesarudzo
Vnox - David Magen Barbarian Ring yeVarume, Calm Punk, Durable Steel, Muslim jewelry, 8, 9, 10, 11, 12, North America Ukuru
16,01€ Sarudzo dzesarudzo
EUEAVAN - Judaica chishongo chemujaha chevarume nevakadzi, gumi emiti, chishongo chine vakadzidza vechiIsrael chakatemerwa trapezoidal pendant, zvishongo zveMuslim
33,87€ - 36,28€ Sarudzo dzesarudzo
Collare - David Magen Actor pendant yevarume nevakadzi, muapyre simbi, israel zvishongo, spar tinsel, tricolor mhete, P200
30,62€ - 32,32€ Sarudzo dzesarudzo
Imperial ine pendant yakasungirirwa naDavid, inogara isimbi cheni cheni, goridhe fardant, vatendi zvishongo, Buddhist, iced, yevarume
29,42€ - 31,68€ Sarudzo dzesarudzo
Rangu Rakaumbwa - David Artist Akazadzisa Round Hollow Mhete, Mhete Yemuchato, Yevakadzi Zvishongo, Vintage, Dhiominational, Islamist, Flavescent Wiccan Lagre
10,85€ Wedzera ngoro
Teamer 2020 Nhau Norman Pendant Necklace yechiJudha David Satellite ChiHebheru Chishongo Rookie Tinsel Wicca Nhanhatu Nyeredzi Pendant Zvishongo
12,02€ - 15,64€ Sarudzo dzesarudzo
Stainless simbi cheni ine pendant yemufananidzo weisrael, nzira yezvishongo, hexagram, Magen, David, ane doteti naDavid, muslim chipingamupinyi
Ringlet ine bigot pendant yevarume, orthodox jewel ine satellite yaDavid
16,84€ Wedzera ngoro
David Hove Rippled Trapezoidal Comet Myosotis, Harpoon, Container Arch, Yakagadzirwa nemaoko Zvishongo Zvishongo, Kuunganidza Chiitiko 2019
12,57€ Sarudzo dzesarudzo
Skyrim Hamesh Hamsa Glove Pendant Necklace Inoshatisa Ziso Simbi Yakagadzika Order yeNeck Wire Mesh Maketani Idhori Israeli Zvishongo zveVarume Varume.
14,79€ - 15,27€ Sarudzo dzesarudzo
David Asterisk Armor Buckle, Kurumidza & Mutete Mudikanwi, Kushandisa Nyowani, Ita-I-Wako Mhete, Institution Chinzvimbo, Bhuku Rakagadzirwa Zvishongo
11,17€ - 11,43€ Sarudzo dzesarudzo
Surplus Ferrule neTinsel Pendants yeVakadzi, Unyanzvi, David Monster, Zvipo, Spar Vest, Wyvern, Yakareba Maketani, Zvishongo
17,11€ Sarudzo dzesarudzo
Dawapara - Yevakadzi David Meteor Necklace, Supernatural Pendants, Zvishongo, Tinsel Charms, Logic
11,35€ - 16,10€ Sarudzo dzesarudzo
Padivi - Referral Referral Necklace YeVakadzi, Inowanikwa Minimalist Impalpable Referral, Coker Gadget, Impalpable Horseshoe Bat Mitzvah, Obol jewelry
16,89€ Sarudzo dzesarudzo
Yakasimba Simbi Rings yeVarume, Judaime, David Asteroid Hexacram, Punk Hip Hop Mens Commissioner Wevana, Anoshingairira Anofarira Zvishongo, Windy Schematically
16,60€ - 16,71€ Sarudzo dzesarudzo
Cheni nePendant mune Kurongeka kwaDavid Shield, Hexagram, Choker, Chipingamupinyi murima Error, Imba Yekushongedza Zvishongo, Tsika Yakatumirwa
11,37€ Wedzera ngoro
U7 - David akadzinga chishongo chevarume nevakadzi, chisingapindiki chesimbi pendende, chakacheneswa, chishongo, munyengeri, P723
25,53€ Sarudzo dzesarudzo
InoteveraVance - Zvishoma Metropolitan Tungsten Kuroora Mhete, David Nickel Meteor, Mapurisa Zvishongo
12,01€ Sarudzo dzesarudzo
RYOUCUTE - 100% Chaiwo sirivheri Machende Mhete, Chiitiko Zvishongo, David Asterisk, Old Fashoni
17,25€ Wedzera ngoro
Vintage Nyanzvi yeDavid Yakaunganidzwa Nzeve Yevhudzi YeVakadzi, Yakabatana Menorah Zvishongo, Chiitiko Chimiro, Mvura Rheumatism, Strenna
11,66€ - 12,02€ Sarudzo dzesarudzo
Dawapara - David Meteor Pendant Necklace muKunze kwepakati, Gaelic Knots, Happy Straitjacket, Amulet, Bone, Zvishongo
11,77€ - 16,63€ Sarudzo dzesarudzo
Clair de David teardrop bangle yevakadzi, conjungo jewel, accordion obolus, Aesthetic Muenzaniso, yakadyarwa commoner
16,27€ Wedzera ngoro
Teamer - Wiccan Round Mhete dzeVakadzi, Kuungana Chiitiko, Vintage, Artist Tone yaDavid, Mvura Paws, Mutambo Charity
16,26€ Wedzera ngoro
Lemegeton-chishongo chine bako bako, David nemeteor, grid, toni yegoridhe, zviratidzo zvemasangano, zvishongo
12,02€ Sarudzo dzesarudzo
Yakakura yaDavid Satellite Dangle Mhete dzeVakadzi AAA Cubic Zirconia Spar Zvishongo, Mvura Paw Munhu Mukuru, Goridhe / Sirivheri Toni, E113, 2016
29,04€ Sarudzo dzesarudzo
Vnox Isingachinjiki Iron Iron Magen David Yakareba Necklace yeZvisikwa Calvary Yakagadzirwa Necklace Nyeredzi yaDavid Zvishongedzo Tichifunga HOMBRE Batanidza
18,34€ Sarudzo dzesarudzo
Fate raDavid Pendant Yemuchato Bhendi, Zodiac Pleiad, Mens, Simbi Apyre, Vintage Zvishongo, Pamuviri Fetish
23,33€ Wedzera ngoro
David Fireball Pendant Yemuchato Bhendi, Vintage Zvishongo, Sirivheri Zviyo, Hexagram Charms, Dzinodzora Ziso, ReVarume neVakadzi, 23533
12,70€ - 12,86€ Sarudzo dzesarudzo
Yekusingaperi Simbi Rapper Fly YeVarume Hip Hop Zvishongo NePavers Tinsel Uye Bling
24,28€ Wedzera ngoro
Vnox - Kunze kwekunze Simbi Isimbi Pendant yeVarume, Male jewelry, Sigil yaLusifa, David Histrion, 24 inch Curb
17,58€ Sarudzo dzesarudzo
Vakadzi vaDavid Kudzoka Mane Nzeve, Round, Clip-On, Goridhe, Hexagram
17,03€ Wedzera ngoro
Akasimba Simbi David Akadzidzira Nzeve Bhandi yeVarume neVakadzi, Hip Hop Zvishongo, Tassel Chains, Rock Punk Pendant
11,85€ - 12,42€ Sarudzo dzesarudzo
Rangu Rakaumbwa - David Cave satellite formality pendant, chishongo, enamel chitendero mazango, akatendeka foundry auction, schematically auction, 10 kegs
17,67€ Wedzera ngoro
Yakanyatso Kukwazisa Tsono, Sirivha Dhayi, Yakadyarwa David Pendant, Yevakadzi neVarume Mhete, Charms Zvishongo, Israel
12,56€ Wedzera ngoro
Vintage Eglantine Fleurette Zvinosemesa Ziso Buckle, Metallic Inocheka David Meteorite Maketani, Book Coincidence Charms, Yevakadzi Choker Zvishongo, Rough clearance
12,45€ Sarudzo dzesarudzo
Unids - Shalom yakachenesa wachi, zvishongo, zvakabviswa, David Actor, Tampon, 1 vaudeville
18,54€ Sarudzo dzesarudzo
Chishongo chinhu chakanaka chekushongedza chakagadzirwa negoridhe, sirivheri, madhaimani, platinamu, maparera uye zvigadzirwa zvekushongedza zvinowedzera chimiro chako nehunhu. Iyo inopfekedzwa nevarume nevakadzi kuratidza yavo yemagariro chinzvimbo. Zvishongo zvechiJuda ichiri chinhu chinoshamisira kwazvo. Vakadzi vanonamata zvishongo zvechiJuda nekuda kwerunako rwayo, kubatana kwetsika, uye hunhu hwepamusoro.
Zvishongo zvechiJuda zvishongo
Zvishongo zvechinyakare zvinobva kumativi ese epasi ibasa reunyanzvi pachahwo. Zvisinei, hunhu hunotevera hunosiyanisa zvishongo zvechiJuda:
Maumbirwo akasarudzika ejometri, maemail uye mifananidzo.
Yechitendero uye yemweya mameseji muzviratidzo
Tsika nenhaka zvinochengetedzwa.
Akakurumbira echiJuda zvishongo zvigadzirwa
a) Nyeredzi yaDavidi
Ichi ndicho chidimbu chinoshamisa kwazvo chezvishongo zvechiJuda. MuchiHeberu inozivikanwa zvakare se "Magen David". Iyo logo inomiririra nyeredzi nhanhatu-yakanongedzwa inoumbwa nemaviri akachinjika akaenzana matatu. Iwo mativi matatu anoratidza iwo madhivhuru maviri aMwari: iyo mirawo weTora nemisimboti yeKabbalah nekuitwa kwavo. Kwakatangira iyo Nyeredzi yaDavidhi chiratidzo inogona kuwanikwa pano.
-Iye Nyeredzi yaDavid chishongo chimwe chezvakanaka kwazvo zvezvishongo zvechiJuda kupfeka neyakajairwa kana echazvino zvipfeko. Ivo vanowanikwa mune yegoridhe yakarongedzwa, sirivheri yakarongedzwa uye kunyange madhaimani akaiswa.
Iyo Mezuzah yakakosha muchiJuda nekuti ine ndima dzinobva muTora, kana rugwaro rwaMwari mumutauro wechiHebheru. Munamato wechiJuda "Shema Yisrael" wakanyorwa mumavhesi echiHeberu ayo anoti: "Inzwa, Israeri, Ishe ndiye Mwari wedu, uye Ishe mumwe". Ine Klaf muchiHeberu, iyo inodhindwa uye yakapetwa mukati meganda rekushongedza, pakanyorwa mavhesi acho. Mukati memazuva makumi matatu ekupinda mumusha mutsva, vazhinji vevaJudha vanouturika pamasuo avo.
Zvishongo nezvishongo: wechiJudha Mezuzah anowanikwa semapendekete akaomarara ekupfeka seketani kana kuturika pamikova. Iyo pendende igoridhe kana sirivheri yakarongedzwa uye inoratidzira yakakosha yekushongedza mapatani.
Iye anozivikanwa sedumwa rerombo kune maJuda neIsrael. Kuchengetedza ziso rakaipa, inowanzo shandiswa muNorth Africa neMiddle East muchimiro chemachira emadziro uye zvishongo. Zvinonzi Hamsa yakatanga kuEjipitori. Hamsa ine pateni inoita kunge muchindwe wakavhurika neminwe mishanu yakanongedza pasi. Akanaka maHamsa maketani, zvishongo uye pendende anowanikwa mune matatu zvakajairika dhizaini: ziso, chai uye nyeredzi.
d) Chai tii
Iro izwi rechiHebheru rave richishandiswa sechinhu chakajairika chechiJudha kubva muzana ramakore rechi18. Izwi chai rinoreva "kurarama", uye chiratidzo chinoratidza mabhii "Chet" uye "Yod". MuChiJuda, iwo mavara anoonekwa sechiratidzo chinoonekwa chinoratidza iyo nhamba XNUMX mukuverenga nhamba, iyo inonzi nhamba yechipo cherombo muchiJuda. Icho chinhu chakajairika chechiJudha chinhu nekuti chinozivikanwa nekuporesa zvivakwa. Zvakare chiratidzo chehupenyu hwakareba uye kubudirira.
Chai inowanikwa mune akasiyana masitayera anoyevedza sesirivheri inoshamisa uye goridhe yakanamirwa mitsipa uye pendende.
Torah, Shema Yisrael, Menorah, Ant Le Dodi, Njiva, uye Ziyoni mamwe akati wandei akajairika echiJuda zvigadzirwa.
Zvishongo zvechiJuda zvinoita sekutiswededza padyo naMwari, ndosaka zvichisiyana kwazvo. Chidimbu chimwe nechimwe chezvishongo chine kukosha kwechitendero.
Chidimbu chimwe nechimwe chezvishongo chine kukosha kwakakosha kwechitendero uye chinotendwa kunounza rombo rakanaka, mufaro, kuwirirana uye hupfumi.
Nhoroondo uye zvinoreva Nyeredzi yaDavidi
Icho chinhu chakajairika kuti nhoroondo yerudzi rwevanhu yakatanga kunyorwa nezviratidzo nemifananidzo. Kubva pamifananidzo yekare yekuEjipitori kuenda kumifananidzo yepamberi, kugona kwemunhu kutaura kuburikidza nemifananidzo kwakaratidza kuve chishandiso chakakosha kuburikidza nemazera, uye kunyangwe mutauro wedu wakanyorwa hausisiri kungogumira kumagirufu akasvinwa pamadziro, kushandiswa kwezviratidzo kuratidza hombe Pfungwa inzira inokosha ichiri kushandiswa nanhasi - kunyanya pakati pezvitendero netsika pasi rose. Pasi rese vanhu vanoshandisa zviratidzo kuratidza zvavanotenda kana kubatana kwesangano, uye sezvo mazhinji ezviratidzo izvi aine nyaya dzinonakidza kuseri kwavo, takafunga kuti zvingave zvakanaka kunyatso tarisa zvinorehwa. zviratidzo zvechiJuda: iyo Nyeredzi yaDavidi!
Chii chinonzi Nyeredzi yaDavidi uye inomiririrei?
Nyeredzi yaDavid chimiro chakatanhatu-chakatarwa chejometri chinozivikanwa sehexagram, iyo inoumbwa kana mativi matatu akaenzana-akasenderedzwa akabatanidzwa kuita imwechete nyeredzi-yakaita patani. Kwakatangira chiratidzo hachina kujeka, zvisinei, chakagamuchirwa zvakawandisa nemaJuda sechiratidzo chekuzivikanwa kwechiJuda muMiddle Ages, uye kubvira ipapo Nyeredzi yaDavidi yakave chimwe chezviratidzo zvechiJudha zvine simba uye zvine simba. Inozivikanwa kubva mutsika dzechiJuda. . Izvi zvakakonzera kuti mucherechedzo ubatanidzwe muzvinhu zvese zvehupenyu hwechiJuda, ichiva hunhu hwekusarudza mune zvese kubva pahunhu hwechivanhu kusvika kune zvishongo, kuvaka uye akasiyana maumbirwo, ichisimbisa basa rayo sechiratidzo chekupedzisira chechiJuda. Nechikonzero ichi, iyo Nyenyedzi yaDavid yaizopedzisira yave chiratidzo chakasarudzwa kuoneka pamureza wenyika yeIsrael, inomiririra kwete Nyika yeIsrael chete, asiwo maJuda ese pasi rese.
Ko Nyeredzi yaDavidi inotora kupi zita rayo kubva?
Hazvina kujeka zvachose kuti zita rekuti "Nyeredzi yaDavidi" rakabvepi, zvakadaro, zvinofungidzirwa kuti rakabva pazita rechiratidzo rechiHebheru, "Magen David", zvinoreva kuti "Shield yaDavid". Izwi iri rakatanga kuoneka mumagwaro ekutanga echiJuda, zvakare muSiddur kwayakashandiswa nenzira yedetembo kurondedzera Mwari senhoo inodzivirira imba yaMambo David uye nekutsanangura gare gare mucherechedzo wezita rimwechetero iro rakazozivikanwa seyeredzi . raDhavhidhi. Chii chinonakidza kucherechedza, zvisinei, ndechekuti isati yadaidzwa kuti Nyeredzi yaDavidi, mahegiramu ainyanya kutaurwa mumagwaro ekare seChisimbiso chaSoromoni, zita rakapihwa mucherechedzo zvichibva mungano pamusoro pemhete inoshamisa inopfekwa Mambo Soromoni akanzi akange akanyorwa nehexagram.
Chii Chinomiririrwa neIye Star yaDavid maererano neKabbalah?
ChiJudha Kabbalah ipfuma yedzidziso dzekare dzakavanzika dzakanyorwa mazana emakore apfuura dzinopa ruzivo rwakasiyana mukushanda kwemukati meTora, Mwari, uye Nyika. Idudziro dzakadzama uye dzisinganzwisisike dzinowanzo kuve dzakaomarara kana dzisinganzwisisike, asi hunhu hwavo hwakadzika hwagara huchiburitsa pachena mativi ese ehupenyu hwechiJuda, uye tsananguro dzaKabbalah dzezviratidzo zvakaita seNyeredzi yaDavid zvinonyanya kujekesa. Zvinoenderana netsika yeKabbalistic, heano dzimwe nzira dzekududzira maitiro eNyeredzi yaDavidi:
Denga nepasi - Setsika, Nyeredzi yaDhavhidha inodhonzwa nekukwirisa mativi matatu akatarisana akatarisana. Tsananguro yeKabbalistic yeiyi ndeyekuti iyo Triangle inonongedza kumusoro inomiririra Mwari neake place mumatenga seMusiki weChadenga nepo pasi yakadzika katatu inomiririra pasi nevanhu. Kupindirana kwevaviri kunovavarira kuratidza kuti zvemweya uye zvekuda zvinhu zvinofambidzana.
Sungano yaMwari - Kungofanana netsananguro yapfuura, kududzira uku kunotarisa pasimba rematatu. Mativi matatu etriangle anofungidzirwa kuti anomiririra iwo matatu akakosha maitiro echiJuda - Mwari, Torah nevanhu veIzirairi - Kabbalah inofungidzira kuti kona imwe neimwe yeNyeredzi yaDavid inomiririra kubatana uku kubva kune imwe kona. Iyo yekumusoro netriangle inoratidza yepamoyo manzwiro ehukama nepo pasi yekudzikira inoratidzira chinhu chemuviri chinouya kubva pakuita.
Omnipresence - Iyo pfungwa yekuti Mwari ndewemasimbaose uye wepasirese haisi pfungwa nyowani muchiJuda. Torah inotsanangura simba raMwari kakawanda, saka zvine musoro kuti imwezve dudziro yeKabbalistic yeNyeredzi yaDavid inoongorora chimiro chayo chose uye ichiongorora kukosha kwemapoinzi ayo matanhatu. Aya matanhatu mapoinzi anotendwa anoreva kune yega yega nzira nhanhatu uko kuvepo kwaMwari kunogona kunzwika: Maodzanyemba, Maodzanyemba, Kumabvazuva, Kumadokero, Kumusoro nekuZasi; nepo pakati penyeredzi ichireva pakati penzvimbo, uko Mwari ariko senzvimbo yezvose
Rudzi Rumwe - Nemapoinzi matanhatu uye mativi gumi nemaviri, Kabbalah inoongorora pfungwa yekuti mativi gumi nemaviri eNyeredzi yaDavid anoreva kumarudzi gumi nemaviri eIsrael: Reuven, Shimon, Revhi, Yehuda, Issacar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Asher , Yosef naBenyamin, uye nemarudzi gumi nemaviri akaumba nyika yakasarudzika yeIsrael.